““ကက်သလစ်သာသနာတော်တွင် Dogma ယုံကြည်ရာအချက်ပေါင်း ၂၅၅ ခုရှိသည်”” ဟု ဘုန်းတော်ကြီး ဒေါက်တာ ဒိုမီနစ်သက်တင် မိန့်ကြား - Gloria News Journal
““ကက်သလစ်သာသနာတော်တွင် Dogma ယုံကြည်ရာအချက်ပေါင်း ၂၅၅ ခုရှိသည်”” ဟု ဘုန်းတော်ကြီး ဒေါက်တာ ဒိုမီနစ်သက်တင် မိန့်ကြား
ဂလိုရီယာသတငျးဂြာနယျမှ တတိယအကွိမျ ဦးဆောငျကငြျးပသော ကကျသလဈသာသနာတောျ၏ ယုံကွညျရာအခကြျမြား (Catholic Dogmatic Forum) ဆိုငျရာ ဟောပွောပှဲ (စိနျမရေီ၊ ရနျကုနျ)
ရနျကုနျ၊ မတျလ ၂၀၊ ၂၀၁၆
ဂလိုရီယာသတငျးဂြာနယျတိုကျမှ မတျလ (၂၀) ရကျနေ့၌ တတိယအကွိမျအဖွဈ ဦးဆောငျကငြျးပသော ““ကကျသလဈသာ သနာ တောျ၏ယုံကွညျရာအခကြျမြားဆိုငျရာ ဟောပွောဆှေးနှေးပှဲ”” ၌ ဟောပွောဆှေးနှေးပေးတောျမူသော ရနျကုနျမွို့တောျရှိ စိနျမရေီ ကာသီဒွယျကြောငျးထိုငျဘုနျးတောျကွီး ဒေါကျတာဒေါမီနဈသကျတငျက ““ကကျသလဈသာသနာတောျတှငျ ယုံကွညျရာ အခကြျပေါငျး ၂၅၅ ခကြျနှငျ့ ယုံကွညျရာအခကြျအဆငျ့သို့ မရောကျသေးသော အမှနျတရားအပေါငျး ၁၀၂ ခု ရှိသညျ”” ဟု မိနျ့ကွားခဲ့ပါသညျ။
၎င်းငျးဟောပွောဆှေးနှေးပှဲကို စိနျမရေီကာသီဒွယျဘုရားကြောငျးဝငျးရှိ၊ သာသာနာ့ခနျးမဆောငျတှငျ ကငြျးပရာ၊ ပရိသတျပေါငျး (၂၀၀) ကြောျ တကျရောကျခဲ့ကွပွီး ရနျကုနျမွို့တောျ ဗိုလျအောငျကြောျလမျးပေါျရှိ စိနျမရေီကာသီဒွယျကြောငျးထိုငျ ဘုနျးတောျကွီး ဒေါကျ တာဒေါမီနဈသကျတငျက အားပါးတရ ဆှေးနှေးဖွကွေားပေးတောျမူသညျ။
ပထမဦးစှာ ဘုနျးတောျကွီးသကျတငျက ကကျသလဈသာသနာတောျ၏ ယုံကွညျရာအခကြျနှငျ့ပတျသကျပွီး ““ယုံကွညျရာ အခကြျ Dogma မြားသညျ ကယြျပွနျ့နကျနဲပွီး ယနေ့ဟောပွောဆှေးနှေးခြိနျ နှဈနာရီသာရသောကွောငျ့ ယုံကွညျရာအခကြျရဲ့ အခွခေံ သဘောတရားလောကျသာ ဟောပွောဆှေးနှေးနိုငျမှာ ဖွဈကွောငျး၊ နောကျနောငျအခှငျ့အရေးပေးပါက အခွားသောဘုနျးတောျကွီး မြားကိုပါ ဖိတျခေါျပွီး သုံးလေးရကျလောကျ ဟောပွောဆှေးနှေးကွမယျဆိုလြှငျ ပိုမိုအကြိုးရှိမှာဖွဈကွောငျး၊ ယခုဆှေးနှေးပှဲကို ဦးဆောငျကငြျးပပေးသော ဂလိုရီယာသတငျးဂြာနယျ၏ အယျဒီတာခြုပျဖွဈသော ဂြိုးဇကျဝငျးလှိုငျဦးအား ပနျကွား မတျေ်တာ ရပျခံခဲ့ပါသညျ။
ထို့နောကျ ဘုနျးတောျကွီးဒေါကျတာသကျတငျက ကကျသလဈသာသနာတောျ၏ယုံကွညျရာအခကြျမြားနှငျ့ပတျသကျပွီး ““ကကျသလဈ သာသနာတောျသညျ ဘုရားသခငျ ဗြာဒိတျတောျတှငျပါဝငျသော သို့မဟုတျ ဗြာဒိတျတောျနှငျ့မဖွဈမနေ ဆကျနှယျနေ သော အမှနျတရားတဈခုကို ခရဈယာနျမြား အတှကျ မယုံမနရေသဘောဖွငျ့ ပွနျလညျရုပျသိမျး၍ မရနိုငျသောယုံကွညျသကျဝငျမှု မြိုးဖွငျ့ လကျခံစသေောအခါ အသငျးတောျ၏ သှနျသငျမှုအာဏာတှငျ ယုံကွညျရာအခကြျမြား၏ပွဌာနျးခကြျကို အမိနျ့အာဏာပုံစံ ဖွငျ့ ထုတျပွနျကွညောရာတှငျ ခရဈတောျသခငျထံမှ ရရှိသော အခှငျ့အာဏာကို အဆငျ့အမွငျ့ဆုံးအနအေထားတှငျ အပွညျ့အ၀ အသုံးခလြကြျ ရှိ၏”” ဟု ““ကကျသလဈသာသနာတောျ၏ မွတျသောအယူဝါဒ၊ နံပါတျ ၈၈”” တှငျ တိတိလငျးလငျး ဖောျပွထားသညျ ဟု အစခြီ မွှကျကွားတောျမူသညျ။
ထို့အပွငျ ဘုနျးတောျကွီးသကျတငျက ကကျသလဈသာသနာတောျ၏ယုံကွညျရာအခကြျမြားသညျ ““အသငျးတောျ၏သနျ့ရှငျး မှနျ မွတျသော ရှေ့ထုံးသကျသမြေား sacred tradition၊ သမျ်မာကမြျးစာတောျမွတျ sacred scripture နှငျ့ တမနျတောျမှရရှိ လာသော သာသနာတောျ၏ သှနျသငျခှငျ့အာဏာ magisterium”” မြားပေါျတှငျ အခွခေံပွီး ဆငျးသကျလာကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့ ယုံကွညျရာအခကြျမြားသညျ ၎င်းငျးအခွခေံ (၃) နှငျ့ကငျးကှာပွီး မသတျမှတျနိုငျကွောငျး”” ဖွငျ့ မီးမောငျးထိုးပွခဲ့ပါသညျ။
ဘုနျးတောျကွီးသကျတငျက ကကျသလဈသာသနာတောျရဲ့ သှနျသငျခကြျနှငျ့ ယုံကွညျရာအခကြျတို့နှဈခု၏ ကှာခွားခကြျမြားကို ရှငျးပွရာတှငျ ““ကကျသလဈသာသနာတောျ၏သှနျသငျခကြျမြားဆိုသညျမှာ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ယုံကွညျခွငျး၊ လူ့ကငြျ့ဝတျမြားနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ ကကျသလဈသာသနာတောျ၏ သှနျသငျခကြျမြားဖွဈပွီး၊ ထိုအထဲတှငျ ယုံကွညျရာအခကြျမြားနှငျ့ အသငျးတောျက ရှငျးရှငျးလငျးလငျးအဆိုပွုပွဌာနျးထားပွီး ယုံကွညျရာအခကြျမြားနှငျ့ ဆကျစပျနသေညျ့ သှနျသငျခကြျမြားလညျး ပါဝငျကွောငျး၊ ယုံကွညျရာအခကြျမြား ဆိုသညျမှာ သမာကမြျးစာတောျမွတျနှငျ့သနျ့ရှငျးမွငျ့မွတျသောထုံးတမျးအစဉျအလာတှငျ တှေ့ရသညျ့ တရားဝငျဘုရားဗြာဒိတျတောျမြားကို ကကျသလဈသာသနာတောျက လေးလေးနကျနကျ တိတိကကြြ ဖှငျ့ဆိုပွဌာနျးထုတျပွနျထား သော ယုံကွညျရာအခကြျမြားကို ကကျသလဈခရဈယာနျမြားသညျ ဆှေးနှေးငွငျးခုံခွငျးမပွုဘဲလကြျ၊ အကွှငျးမဲ့သမာတရားဖွဈတောျ မူသော ဘုရားတနျခိုးအာဏာတောျ၏ပါရမီအားဖွငျ့ မှနျကနျသခြောသညျဟု လကျခံရမညျဖွဈကွောငျး၊ သာသနာတောျ၏ မမှားနိုငျသော သှနျသငျခွငျးအားဖွငျ့ ခရဈယာနျယုံကွညျခွငျးအတှကျ အဆိုပွုလာသော အမှနျတရား၌ ရှေးခယြျကောကျယူစရာ နရောမရှိကွောငျး မိနျ့ကွားခဲ့ပါသညျ။
ထို့နောကျ ““ဆေးကွောခွငျးမငျ်ဂလာခံယူထားသူတဈဦးက ယုံကွညျရာအခကြျတဈခုခုကို လှတျလှတျလပျလပျငွငျးဆနျလြှငျဖွဈစေ၊ ဆနျ့ကငြျလြှငျဖွဈစေ၊ ထိုသူ (သို့မဟုတျ) သူမသညျ မိဈ်ဆာဒိဋိအပွဈကို ကြူးလှနျခွငျးဖွဈရာ သာသနာတောျမှဖယျကဉြျခွငျး အပွဈဒါဏျကို အလိုအလြောကျ ခံရပွီဖွဈကွောငျး ကကျသလဈသာသနာတောျကာနှနျဥပဒေ ၇၅၁ ကို ကိုးကားပွီး ရှငျးပွခဲ့ပါသညျ။ ဆကျလကျပွီး ဘုနျးဘုနျးက ““ကကျသလဈသာသနာတောျတှငျ သာသနာတောျမှဖယျကဉြျခွငျးကို အလှနျရှားရှားပါးပါးကငြျ့သုံးလေ့ ရှိကွောငျး၊ သာသနာတောျမှ ဖယျကဉြျခွငျးဆိုရာ၌ ကကျသလဈသာသနာတောျမှ ထုတျပယျခွငျးမဟုတျဘဲ၊ ကကျသလဈသာ သာနာတောျ၏ ကာနှနျဥပဒေ ၁၃၃၁ ပါအမှုတောျမွတျတို့၌ ပါဝငျခွငျးမပွုရနျတားမွဈခွငျးသာ ဖွဈကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့ ကိုယျတောျ မွတျကို မပငျ့ယူနိုငျသောျလညျး မဈ်ဆားပူဇောျခွငျး၊ ဆုတောငျးမတျေ်တာပွုခွငျးမြား၌ပါဝငျရနျ တာဝနျရှိသကဲ့သို့ နောငျတသံဝဂေဖွငျ့ ပွနျလာကာ ကကျသလဈသာသနာတောျတှငျ တကျတကျကွှကွှ ပွနျလညျပါဝငျလာနိုငျရေးကို ရှေးရှုလကြျ ကကျသလဈသာသနာ တောျနှငျ့ဆကျ စပျရေးကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးထားရနျ အားပေးတိုကျတှနျးနှိုးဆောျရမညျ ဖွဈကွောငျး မိနျ့ကွားခဲ့ပါသညျ။
အထကျတှငျ ဖောျပွထားသကဲ့သို့ ဗြာဒိတျတောျပေးထားသော အမှနျတရားယုံကွညျရာအခကြျမြား အဖွဈလညျးကောငျး၊ ကကျသလဈ ယုံကွညျခွငျးဆိုငျရာ သှနျသငျခကြျမြားအဖွဈ လညျးကောငျး၊ အသငျးတောျသှနျသငျသမြှအားလုံးသညျ မှားယှငျးခွငျးသို့ မရောကျနိုငျကွောငျး၊ အဘယျကွောငျ့ဆိုသောျ ဓမျ်မညီလာခံအစညျးအဝေးကွီးတှငျ ဆရာတောျကွီးမြားက ရှငျပီတာ၏အရိုကျအရာကို ဆကျခံသော ရဟနျးမငျးကွီးနှငျ့အတူ ယုံကွညျသူမြားအား ယုံကွညျလကျခံရမညျ့အမှနျတရား၊ ကငြျ့ကွံရမညျ့မတျေ်တာတရား၊ မြှောျ လငျ့ရမညျ့ မငျ်ဂလာတရားမြား သှနျသငျသညျ့အခါ အမွငျ့ဆုံးသောသှနျသငျပိုငျသညျ့အာဏာကို ကငြျ့သုံးကွသောအခြိနျတှငျ ဤမမှားယှငျးနိုငျခွငျးသညျ ဆရာတောျမြားအဖှဲ့အစညျးတှငျ ရှိခွငျးကွောငျ့ ဖွဈကွောငျး၊ မွတျသောအယူဝါဒ အပိုဒျ ၈၉၁ ကို အောကျပါကမြျးပိုဒျမြားယှဉျတှဲလကြျ ရှငျးလငျးဆှေးနှေးသှားခဲ့ပါသညျ။
ကကျသလဈအသငျးတောျသညျ ယုံကွညျခွငျး၊ လူ့ကငြျ့ဝတျဆိုငျရာသှနျသငျခွငျးမြားတှငျ မမှားနိုငျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသောျ ဘုရားသခငျ၏အိမျထောငျစုသညျကား အသကျရှငျသောဘုရားသခငျ၏ အသငျးတောျ ဖွဈသညျ။ ထိုအသငျးတောျကား သမျ်မာတရား၏ မဏ်ဍိုငျနှငျ့သမျ်မာတရားတညျရာလညျး ဖွဈသတညျး။ (ပထမတိမောတေ ၃း၁၅) ကောငျးကငျနိုငျငံတောျ၏သော့ကိုလညျး သငျ့အား ငါပေးမညျ။ ကမျ်ဘာမွပေေါျတှငျ သငျခညြျနှောငျသမြှသညျ ကောငျးကငျဘုံတှငျ ခညြျနှောငျလကြျ ရှိလိမျ့မညျ။ ကမျ်ဘာမွပေေါျတှငျ သငျဖွလှေှတျသမြှသညျလညျး ကောငျးကငျဘုံတှငျ ဖွလှေှတျလကြျ ရှိလိမျ့မညျ။ (ရှငျမာတေဦး ၁၆း၁၉)
ဂလိုရီယာသတငျးဂြာနယျ၏အယျဒီတာခြုပျဖွဈသော ဂြိုးဇကျကုနျဇမှုနျးက ““ရဟနျးမငျးကွီးအတု နဲ့အစဈကို ဘယျလိုခှဲခွားခဲ့ကွ သနညျး။ ထိုအတုအယောငျရဟနျးမငျးကွီးမြားက ယုံကွညျရာအခကြျတှကေို ကွငွောခဲ့တာမြိုး ရှိခဲ့ပါသလား”” ဟူသော မေးခှနျးကို ဘုနျးဘုနျးဒေါကျတာသကျတငျက ““အဒေီ ၁၃၇၈ မှ ၁၄၂၃ အတှငျး တရားဝငျရှေးကောကျတငျမွှောကျထားခွငျး ခံရသော ရှငျပီတာ၏ အရိုကျအရာကို ဆကျခံသညျ့ ရောမမွို့၏ဂိုဏျးခြုပျဆရာတောျကွီးမြားလညျး ဖွဈ၊ ရဟနျးမငျးကွီးလညျးဖွဈကွကုနျသော အူးရျဘနျး (၆)၊ ဘိုနီဖေ့ဈ (၉)၊ အငျနိုစဲနျ့ (၇)၊ ဂရဂေေါျရီ (၁၂)၊ မာတငျး (၅) တို့အား ဆနျ့ကငြျပွီး၊ ပွငျသဈနိုငျငံတောငျပိုငျးရှိ အာဗီနောငျ ဟူသော မွို့တှငျ ပွငျသဈနိုငျငံမှကာဒီနယျအခြို့က ရှေးခယြျတငျမွှောကျသညျ့ ရဟနျးမငျးကွီးအတုမြား ဖွဈကွသော ကလေးမငျး (၆) က အဒေီ ၁၃၇၈ မှ ၁၃၉၄ အထိလညျးကောငျး၊ ဘနေဒေဈ (၁၃) က အဒေီ ၁၃၉၄ မှ ၁၄၂၃ အထိ လညျး ကောငျး ရှိခဲ့ကွကွောငျး၊ ရဟနျးမငျးကွီးအတုမြား ဖွဈပေါျလာရခွငျးအကွောငျးမှာ ရဟနျးမငျးမြားကို ရှေးခယြျရာတှငျ တရားဝငျမဝငျ အပေါျ အငွငျးပှားမှုမြား၊ မကြနေပျမှုမြားကွောငျ့ ဖွဈကွောငျး၊ ကကျသလဈသာသနာတောျသမိုငျးတှငျ အတုအယောငျ ရဟနျးမငျး ကွီးမြား၏ သှနျသငျခကြျမြား ရှိကောငျးရှိနိုငျသောျလညျး ထိုသူတို့၏မညျသညျ့သှနျသငျခကြျကိုမြှ ကကျသလဈသာသနာတောျ အနဖွေငျ့ ယုံကွညျရာအခကြျအဖွဈ သှနျသငျခဲ့သညျဟု မိမိအနဖွေငျ့ မသိပါကွောငျးနှငျ့ ထိုကဲ့သို့ ရှိမညျလညျး မဟုတျပါကွောငျး ကို ရှငျးလငျဖွကွေားပေးခဲ့သညျ။
ဆှေးနှေးပှဲတကျရောကျလာသော ပရိသတျတဈဦးက ““စူးစမျးလိုစိတျဖွငျ့ ယုံကွညျရာအခကြျတဈခုခုအပေါျ နားလညျအောငျ သိခငြျတာကွောငျ့ ခကြျခငြျးမယုံဘဲ လေ့လာမယျဆိုရငျ ဘယျလိုမြိုးသကျရောကျမှုရှိသလဲ”” ဆိုတဲ့မေးခှနျးအပေါျ ဘုနျးဘုနျး သကျတငျက ““ကြှနျုပျတို့ကကျသလဈယုံကွညျခွငျးသညျ ဘုရားသခငျထံမှ လာသော ကြေးဇူးတောျဖွဈကွောငျး၊ ငှဖွေငျ့ ဝယျယူမရ နိုငျသကဲ့သို့ အားထုတျလုံးလစိုကျ၍လညျး မရနိုငျကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့ စကားစဈထိုး၊ ငွငျးခုံစူးစမျးရာ မဟုတျသကဲ့သို့ ပွနျလညျ ရုပျသိမျးပွီး မရနိုငျသောယုံကွညျသကျဝငျမှုမြိုး ဖွဈကွောငျး၊ ဘုရားသခငျထံတောျသို့ ခဉြျးကပျသူဟူသမြှသညျ ကိုယျတောျ တညျရှိတောျ မူကွောငျးကိုလညျးကောငျး၊ ကိုယျတောျသညျ မိမိအား ရှာသောသူတို့ကို အကြိုးကြေးဇူးပေးတောျမူသညျကိုလညျး ကောငျး၊ ယုံကွညျကွရမညျဖွဈကွောငျး (The Council of Trent, Sess. V, Heb. 11:6) ဖွငျ့ ရှငျးလငျးဖွကွေားပေးခဲ့သညျ။
ဆကျလကျပွီး ဂြိုးဇကျဝငျးလှိုငျဦးက ““အမှနျတရား (၁၀၂) ခကြျတှကေ တဈခြိနျခြိနျမှာ ယုံကွညျရာအခကြျမြား အဖွဈသို့ ရောကျလာ နိုငျ ပါသလား”” ဟု မေးမွနျးခကြျအပေါျ ဘုနျးဘုနျးသကျတငျက ““ဒီယုံမှားဖှငျ့မရှိသောအမှနျတရားပေါငျး (၁၀၂) ခကြျမြားသညျ ယုံကွညျရာအခကြျမြားအဆငျ့သို့ ရောကျလာနိုငျကွောငျး၊ မညျသညျ့နရောမညျသညျ့အခြိနျပငျ ဖွဈစေ ဤယုံမှားဖှယျမရှိသော အမှနျ တရားမြားကို မညျသညျ့အခါမြှ မှားသညျဟု မသှနျသငျနိုငျကွောငျး”” ဖွငျ့ ရှငျးပွပေးခဲ့သညျ။
ဒေါကျတာရှီလာက ““အငျ်ဂလိပျလို solemnity ဘာသာရေးပှဲနေ့ကွီးတှမှော ဘုရားကြောငျးမတကျဘူးဆိုရငျ အပွဈရှိသလား”” ဟု မေးရာ ဘုနျးတောျကွီးသကျတငျက ““တတိယပညတျတောျတှငျ ဥပုသျနေ့တို့ကို စောငျ့ကိုကွလော့ဟု ဆိုထားပွီး၊ ကကျသလဈ သာသနာတောျ၏ ပထမနှငျ့စတုတျ်ထကငြျ့ဝတျတှငျလညျး တနငျ်ဂနှနေေ့နှငျ့ဘာသာဝတျ်တရားပှဲနေ့တို့တှငျ မဈ်ဆားတရားတောျမွတျကို နာယူကုနျလော့ (ကာနှနျဥပဒေ ၁၂၄၆ – ၁၂၄၈၊ မွတျသောအယူဝါဒ ၂၁၆၈၊ ၂၀၄၂) ဟု ညှနျကွားထားရာ တနငျ်ဂနှနေေ့နှငျ့ ဘာသာဝတရားပှဲနေ့တို့တှငျ မဈ်ဆားတရားတောျမွတျကို နာယူကွရမှာ ဖွဈကွောငျး၊ ဘာသာဝတျ်တရားပှဲနေ့မှနျးလညျး သိတယျ၊ ကနြျးမာရေးလညျး ကောငျးတယျ၊ အခွားကွီးလေးသော အကွောငျးတဈစုံတရာလညျး မရှိ၊ ဘုရားကြောငျးလညျး တကျနိုငျပါလကြျ မတကျခဲ့ပါမူ အပွဈဖွဈနိုငျပါကွောငျး၊ တနငျ်ဂနှနေေ့အားလုံး၊ ဇနျနဝါရီလ ၁ ရကျနေ့၊ ဘုရားမယျတောျပှဲ၊ ဇနျနဝါရီလ ၆ ရကျနေ့၊ မငျးသုံးပါးပှဲ၊ မတျလ ၁၉ ရကျနေ့၊ စိနျဂြိုးဇကျပှဲနေ့၊ သခငျယဇေူးမိုးကောငျးကငျသို့ တကျကွှတောျမူသောပှဲ၊ ကိုယျတောျရှငျ၏ အသှေးတောျနှငျ့အသားတောျပှဲ၊ ဇှနျလ ၂၉ ရကျနေ့ ဖွဈသော စိနျပီတာနှငျ့ပေါလူးပှဲနေ့၊ သွဂုတျလ (၁၅) ရကျနေ့ ဖွဈသော မယျတောျသခငျမ၏ မိုးကောငျးကငျသို့ပငျ့ဆောငျခံရသောပှဲ၊ နိုဝငျဘာလ ၁ ရကျနေ့တှငျ ကရြောကျသော ရဟနျ်တာအပေါငျးပှဲ၊ ဒီဇငျဘာ လ ၈ ရကျနေ့ အပွဈမဲ့သနှယေူတောျမူသော သခငျမပှဲ၊ ဒီဇငျဘာလ ၂၅ ရကျနေ့ ခရဈတောျမှေးနေ့မြားသညျ ဘာသာဝတျ်တရား ပှဲနေ့မြား ဖွဈကွောငျး၊ ထိုနေ့ရကျမြားတှငျ မဈ်ဆားတရားတောျမွတျကို နာယူရနျ တာဝနျရှိကွောငျး ပွနျလညျ ဖွကွေားပေး ခဲ့ပါသညျ။
နောကျထပျပရိသတျအမြိုးသားတဈဦးက ““သနျေ်ဓတားဆေးကို သုံးတာ ဒါမှမဟုတျရငျ ကိုယျဝနျကိုဖကြျခတြယျဆိုရငျ ဘယျအခြိနျမှာ ဘုရားသခငျက သူ့ကို အခှငျ့လှှတျသလဲ”” ဟူသော မေးခှနျးကို မေးမွနျးရာ ဘုနျးဘုနျးသကျတငျက ““ပထမရာစုနှဈမှစပွီး ကကျသ လဈသာသနာတောျက ကိုယျဝနျဖကြျခရြနျကွိုးပမျးမှုတိုငျးသညျ ဆိုးဝါးကွောငျး အတညျပွုခဲ့ပွီး ယနေ့တိုငျမပွောငျးမလဲ တညျရှိနေ ဆဲပငျ ဖွဈကွောငျး၊ သနျေ်ဓဖကြျခခြွငျးတှငျ ကိုယျထိလကျရောကျပါဝငျခွငျးသညျ ကွီးလေးသော ပွဈမှုကြူးလှနျခွငျး ဖွဈကွောငျး (မွတျသောအယူဝါဒ ၂၂၇၁၊ ၂၂၇၂)၊ ၎င်းငျးပွဈမှုကိုကြူးလှနျသူအား ထိုပွဈမှု၏ကယြျပွနျ့သညျ့သဘောသဘာဝအရ ကာနှနျ ဥပဒကေ ခမြှတျထားသော အခကြျအလကျမြားနှငျ့အညီ သာသနာတောျမှ ထုတျပယျခွငျးဒဏျ (ကာနှနျဥပဒေ ၁၃၁၄၊ ၁၃၂၃ – ၁၃၂၄) ခံရနိုငျကွောငျး၊ ၎င်းငျးနရောတှငျ ကကျသလဈသာသနာတောျသညျ သနားညှာတာခွငျးထားရှိမှုကို ကနျ့သတျထား ရနျ မရညျရှယျကွောငျး၊ ပွဈမှု၏ကွီးလေးမှု၊ အပွဈမဲ့သူတို့၏ခံစားရသော ပွနျလညျပွုပွငျမရသောနဈနာမှုမြားကို ထငျရှားပေါျလှငျ စရေနျ သာ ဖွဈကွောငျး၊ ထိုအပွဈအတှကျ အမှနျတကယျဝမျးနညျးကွကှေဲနောငျတရပွီး အာပတျဖွခွေငျးစကျ်ကရမငျးကို ခံယူသညျ့ အခါ ဘုရားသခငျက သူမကို ခှငျ့လှှတျပါကွောငျး၊ ထို့အပွငျ အပွဈခှငျ့လှှတျခံရခွငျးနှငျ့အပွဈဒဏျသညျ သီးခွားစီဖွဈကာ ခှဲခွားသိမွငျ နားလညျရနျ လိုအပျပါကွောငျး၊ ထို့ကွောငျ့ အပွဈခှငျ့လှှတျခွငျး ခံရသောျလညျး အပွဈဒဏျကိုခံထမျးဆပျ ဖွရေမှာ ဖွဈကွောငျး၊ သာသနာတောျမှထုတျပယျခွငျးသညျ အပွဈဒဏျသာဖွဈပွီး အပွဈခှငျ့မလှှတျခွငျး မဟုတျကွောငျး၊ သာသနာတောျမှ ထုတျပယျခွငျး အဓိပျ်ပါယျကို အထကျတှငျ ရှငျးပွခဲ့ပွီး ဖွဈပါကွောငျးဖွငျ့ မိနျ့ကွားခဲ့ပါသညျ။
ဘုနျးဘုနျးဂြော့ရှှထှေနျးကလညျး ““ဒီဟောပွောပှဲကို နားထောငျခငြျလှနျးတာကွောငျ့ သုံးဆယျဘုရားကြောငျးပှဲရောကျတဲ့နရောကနေ အမှီပွနျလာခဲ့ရကွောငျး၊ ဒီကနေ့ဟောပွောဆှေးနှေးခကြျတှဟော အငျမတနျမှ အကြိုးရှိကွောငျး”” ဖွငျ့လညျးကောငျး၊ အမညျ မဖောျ သော ပရိသတျတဈဦးကလညျး ““ကိုယျက ဘုနျးကွီးနားမှာ နတေဲ့သူဆိုတော့၊ အစက ကိုယျ့ဟာကိုယျတော့ ဘာသာတရား အကွောငျး အတောျကို သိပွီ၊ ဘုနျးကွီးလို တရားဟောနိုငျပွီလို့ ကိုယျ့ကိုယျကို ထငျထားပမေယျ့ ဒီဟောပွောပှဲကို နားထောငျမှဘဲ ကိုယျသိတာက ဘာမှမဟုတျသေးဘူးဆိုတာကို နားလညျလာကွောငျး”” ဖွငျ့ ရငျဖှငျ့စကား ပွောကွားကွသညျ။
နောကျထပျကခငြျလူမြိုးဘာသာဝငျတဈဦးက ““ကကျသလဈရဟနျးဆိုတာ ထာဝရရဟနျးဖွဈတယျလို့ ကွားရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခွအေနအေမြိုးမြိုးကွောငျ့ အဲဒီရဟနျးက မိနျးမရပွီး အိမျထောငျသညျဖွဈသှားခဲ့သညျရှိသောျ ၎င်းငျးရဟနျးသညျ ဆကျလကျပွီး ရဟနျး ဖွဈနသေေးပါသလား”” ဟု မေးမွနျးရာ ဘုနျးဘုနျးသကျတငျက ““ ဤမေးမွနျးခကြျသညျ အငျမတနျပွောငျမွောကျသော မေးခှနျးဖွဈပါကွောငျး၊ ကာနှနျဥပဒပေညာမြားကို မေးမွနျးလြှငျ ပိုမိုတိကစြှာဖွကွေားနိုငျမညျဖွဈရာ ပိုမိုနားလညျနိုငျမညျဖွဈ ကွောငျး၊ သို့သောျ မိမိနားလညျသလောကျ ဖွကွေားပေးမညျ ဖွဈကွောငျး၊ ဆာလံ ၁၁၀း၄ တှငျ ““သငျသညျ မာလခိဇဒေကျနညျး တူ ထာဝရရဟနျး ဖွဈသညျ”” ဟု ပါရှိကွောငျး၊ လကျတှေ့တှငျ ထိုအခကြျနှငျ့ဆနျ့ကငြျဖကျမြား ရံဖနျရံခါဆိုသ လို တှေ့နရေကွောငျး၊ ကာနှနျဥပဒအေရ လူဝတျလဲထားသော ရဟနျးနှငျ့တဈခါသိကျ်ခာတငျပွီးလြှငျ ထာဝရဟနျးဟူသော ဒသနိကဗဒေ သဘောသဘာ၀ ရုပျလှနျရဟနျးဟူပွီး သိမျမှေ့နုနယျသညျ့ ကှဲပွားခွားနားခွငျး ရှိကွောငျး၊ ရဟနျးသိကျ်ခာမငျ်ဂလာ သညျ ဆေးကွောခွငျးမငျ်ဂလာကဲ့သို့ ပငျ တဈခါခံယူပွီးလြှငျ ပယျဖကြျခံပွီး မရ၊ မဖြောကျဖကြျနိုငျသော စကျ်ကရမငျဖွဈပွီး (မွတျသောအယူဝါဒ ၁၅၈၂) မညျသညျ့အခါမြှ တရားမဝငျ ပကြျပွယျသညျဟူပွီး မရှိကွောငျး (ကာနှနျ ဥပဒေ ၂၉၀)၊ ကာနှနျဥပဒအေရ လူဝတျလဲခွငျးကို သကျဆိုငျရာဆရာတောျ ကွီးမြားက ရဟနျးမငျးကွီးရုံးတောျသို့ လြှောကျထားတောငျးခံရပွီး၊ ခှငျ့ပွုမိနျ့ရရှိမှသာလြှငျ ကာနှနျဥပဒအေရ လူဝတျလဲခွငျး ပွုနိုငျကွောငျး (ကာနှနျဥပဒေ ၁၀၇၈၊ အပိုဒျ ၂၊ ၁)၊ ကာနှနျဥပဒအေရ လူဝတျလဲထားသောရဟနျးသညျ ရဟနျးတို့နှငျ့သာသကျ ဆိုငျပွီး ရဟနျးမြားသာဆောငျရှကျရမညျ့ အမှုတောျမွတျမြားမှ လှတျငွိမျးခှငျ့ပေးလိုကျခွငျးသာ ဖွဈကွောငျး (မွတျသောအယူဝါဒ ၁၅၈၃)၊ ထို့ကွောငျ့ ဒီလောကတှငျ ကာနှနျဥပဒအေရ လူဝတျလဲထားသောရဟနျးသညျ အပွငျပနျးအားဖွငျ့ ရဟနျးမြားသာ ဆောငျရှကျရမညျဖွဈသော အမှုတောျမွတျမြားကို ဆောငျရှကျခွငျး မရှိဘဲ သာမနျလူပုဂျ်ဂိုလျကဲ့သို့ လုပျကိုငျနထေိုငျ စားသောကျခွငျး ကိုသာ မွငျရမညျဖွဈကွောငျး၊ ဖာသာရျ (သို့မဟုတျ) ကိုယျတောျဟု သုံးနှုနျးခေါျဆိုခွငျးမပွုရကွောငျး၊ ရဟနျးတို့၏ ဝတျရုံသငျ်ကနျး တို့ကို ဆငျမွနျးဝတျဆငျခှငျ့ မရှိကွောငျး၊ သို့သောျလညျး သာမနျဘာသာဝငျလူပုဂျ်ဂိုလျပွနျ မဖွဈနိုငျကွောငျး၊ ထိုသို့ဖွဈခွငျးကို ကာနှနျဥပဒအေရ ရဟနျးအဖွဈအခွအေနပြေောကျပွကျခွငျး မဟုတျဘဲ ဆုံးရှုံးခွငျးသာ ဖွဈကွောငျး (ကာနှနျဥပဒေ ၂၉၀-၂၉၃)၊ ကာနှနျဥပဒအေရ လူဝတျလဲထားသောရဟနျးသညျ ကယျတငျခွငျးစကျ်ကရမငျမြားကို ကွီးလေးသောအကွောငျးတဈစုံ တရာ ကွောငျ့ ဆောငျရှကျရသောျ ကာနှနျဥပဒအေရာ တရားမဝငျ (illicit) သောျလညျး ကြိုးကွောငျးညီညှတျသော အကြိုးရှိ (valid) စသေညျဖွဈရာ သိကာရရဟနျးအမှုတောျဆောငျ၏မထိုကျတနျခွငျးသညျ ခရဈသခငျကွှလာခွငျးကို မပိတျပငျမတား ဆီးနိုငျကွောငျး၊ (Council of Trent: DS 1612; 1154) ဤမေးမွနျး ခကြျနှငျ့ပတျသကျပွီး ကယြျကယြျပွနျ့ပွနျ့ဆှေးနှေးစရာမြားစှာ ကနြျရှိပရော၊ ကာနှနျဥပဒပေညာရှငျမြားနှငျ့တှေ့ဆုံဆှေးနှေးနိုငျလြှငျ ပိုမိုအကြိုးဖွဈထှနျးနိုငျမညျ ဖွဈကွောငျး တိုကျတှနျးပွောကွားခဲ့ပါ သညျ။
ကကျသလဈဘာသာဝငျအမြိုးသမီးနှငျ့အိမျထောငျပွုသော နှဈခွငျးဘာသာဝငျအမြိုးသားက ““ကြှနျတောျ့အမြိုးသမီးက စိနျမရေီ ဘုရားကြောငျးဖကျကို သှားလညျရအောငျလို့ ပွောရငျး ဒီကိုရောကျလာခဲ့ခွငျး ဖွဈကွောငျး၊ ကကျသလဈသာသနာတောျရဲ့သှနျသငျ ခကြျတှနေဲ့ပတျသကျပွီး ဒီနေ့ဟောပွောကနေ အမြားကွီးလေ့လာသငျယူခှငျ့ ရရှိခဲ့တာမို့ ကြှနျတောျအတှကျ အငျမတနျမှအကြိုး ရှိပါကွောငျး”” ဖွငျ့လညျးကောငျး၊ အသကျ ၅၀ ဝနျးကငြျရှိသော ကခငြျလူမြိုးအမြိုးသားတဈဦးကလညျး ““ကြှနျတောျအခု အသကျအရှယျအထိ ယုံကွညျရာအခကြျပေါငျး ဒီလောကျရှိတယျဆိုတာ ဒီနေ့မှ သိပါကွောငျး၊ အခုလိုဟောပွောဆှေးနှေးပှဲကို ကငြျးပပေးသော ဂလိုရီယာသတငျးဂြာနယျတိုကျနဲ့ဘုနျးဘုနျးသကျတငျကိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါကွောငျး၊ နောငျတှငျလညျး ဒီလိုမြိုး ဟောပွောဆှေးနှေးပှဲမြိုးကို ၆ ရကျလောကျ ကွာအောငျ လုပျပေးစခေငြျကွောငျး၊ ဒါမှပဲ ယုံကွညျရာအခကြျမြားရဲ့ တဈခုစီကို အသေးစိတျသိလာပွီး ကိုယျ့ရဲ့ယုံကွညျခွငျးဟာလညျး ပိုပွီးခိုငျမာလာမှာ ဖွဈကွောငျး”” ဖွငျ့ ရငျဖှငျ့စကားပွောကွားပေးသညျ။
ကကျသလဈသာသနာတောျမှ ထုတျပွနျကွညောထားသော ယုံကွညျရာအခကြျမြား
၁။ ဖနျဆငျးရှငျဖွဈတောျမူသော ဘုရားသခငျကို ဖနျဆငျးခံရသောသကျရှိသကျမဲ့မြား၏ ဆငျခွငျတုံတရား၏ သဘာ၀ အလငျးရောငျ ဖွငျ့သာ သခြောစှာသိရှိနိုငျသညျ။
၂။ မွတျစှာဘုရားသခငျ၏တညျရှိနခွေငျးသညျ သဘာဝဆငျခွငျတုံအသိတရားအပေါျတှငျသာ မူတညျခွငျး မဟုတျဘဲ၊ သဘာ၀ ထကျ လှနျကဲသောယုံကွညျခွငျးအပေါျတှငျလညျး မူတညျနသေညျ။
၃။ ပုထုဇဉျလူသားတို့၏နားလညျမှုက မွတျစှာဘုရားသခငျ၏ သဘာဝကို နားမလညျနိုငျပေ။
၄။ ကောငျးကငျနိုငျငံတောျတှငျ ရှိနသေော သူတောျသူမွတျသညျ ဘုရားရှငျမွတျ၏ အနှဈသာရကို ထိုးထှငျးသိမွငျနိုငျသော အသိတရား ကို ပိုငျဆိုငျထားသညျ။
၅။ ဘုရားရှငျမွတျ၏ လြှပျတဈပွကျမြှောျမှနျးခကြျသညျ ပုထုဇဉျလူသားတို့ဝိညာဉျ၏ ပငျကိုယျထိုးထှငျးသိမွငျစှမျးထကျ သာလှနျသညျ့ အပွငျ သဘာဝထကျ လှနျကဲသညျ။
၆။ ပုထုဇဉျလူသား၏ဝိညာဉျသညျ မွတျစှာဘုရားသခငျ၏ထိုးထှငျးသိမွငျခွငျးကို ရရှိနိုငျရနျအတှကျ ဘုနျးဂုဏျတောျ၏အလငျးတောျ ကို လိုအပျသညျ။
၇။ မွတျစှာဘုရားသခငျ၏တညျရှိနခွေငျးသညျ ကောငျးကငျဘုံရှိ သူတောျသူမွတျမြားပငျ နားမလညျနိုငျပေ။
၈။ ဘုရားဂုဏျတောျမြားသညျ ၎င်းငျးဂုဏျတောျမြားအကွားတှငျ ထပျတူဖွဈနကွေသညျ့အပွငျ ဘုရားရှငျမွတျ၏အနှဈသာရမြားနှငျ့ လညျး တဈထပျတညျး ဖွဈနကွေသညျ။
၉။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ အကွှငျးမဲ့ ပွညျ့စုံတောျမူသညျ။
၁၀။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ ပွညျ့စုံခွငျးတိုငျး၌ အနှိုငျးမဲ့တောျမူသညျ။
၁၁။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ အကွှငျးမဲ့ရိုးစငျးတောျမူသညျ။
၁၂။ ဤစကွာဝဋာတဈခုလုံး၌ ဘုရားတဈဆူတညျးသာ ရှိတောျမူသညျ။
၁၃။ တဈဆူတညျးသာ ရှိတောျမူသောျ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ ယထာဘူတဆိုငျရာအသိတရားတှငျမူ စဈမှနျသော ဘုရား သခငျ ဖွဈတောျမူသညျ။
၁၄။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ ထိုးထှငျးသိမွငျခွငျး၏ အနှိုငျးမဲ့တနျခိုးတောျကို ပိုငျဆိုငျတောျမူသညျ။
၁၅။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ အကွှငျးမဲ့ မှနျကနျခွငျး ဖွဈတောျမူသညျ။
၁၆။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ အကွှငျးမဲ့ သဈ်စာရှိခွငျး ဖွဈတောျမူသညျ။
၁၇။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ မိမိအရှငျတောျမွတျ၌လညျးကောငျး၊ ယထာဘုတဆိုငျရာ ကောငျးမွတျတောျမူခွငျးနှငျ့ တခွားသူမြား နှငျ့ ဆကျဆံရာတှငျလညျးကောငျး ဖွဈတောျမူသညျ။
၁၈။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ အကွှငျးမဲ့ သနျ့ရှငျးမွငျ့မွတျခွငျး ဖွဈတောျမူသညျ။
၁၉။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ အကွှငျးမဲ့ ကွငျနာခွငျး ဖွဈတောျမူသညျ။
၂၀။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ အကွှငျးမဲ့ (ပွောငျးလဲခွငျးမရှိ) ထာဝရတညျရှိသော ဘုရားဖွဈတောျမူသညျ။
၂၁။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ ထာဝရ ဖွဈတောျမူသညျ။
၂၂။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ အကွှငျးမဲ့ တိုငျးတာမှုကငျးမဲ့သော အနနျ်တဘုရား ဖွဈတောျမူသညျ။
၂၃။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ ဖနျဆငျးခံအရာအားလုံးတို့၌ တညျရှိနတေောျမူသညျ။
၂၄။ မွတျစှာဘုရားသခငျ၏ သိခွငျးသညျ အသငျ်ခြေ (မရမေတှကျနိုငျ) ဖွဈတောျမူသညျ။
၂၅။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ သာမနျအသိတရားတဈခုက သိလိုကျသော ဖွဈနိုငျခွအေားလုံးကို သိတောျမူသညျ။
၂၆။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ အတိတျ၊ ပဈ်စုပနျနှငျ့အနာဂါတျတှငျ အမှနျတကယျဖွဈပေါျသောအရာအားလုံးကို သိမွငျတောျမူ သညျ။
၂၇။ အနာဂါတျကို ကွိုတှေးသိမွငျသောအသိတရားအားဖွငျ့ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ မမှားယှငျးနိုငျသော အဖွဈတရားနှငျ့အတူ ဆငျခွငျတုံတရားရှိသတျ်တဝါမြား၏ လှတျလပျစှာပွုမှုဆောငျရှကျခကြျမြားကို ကွိုတငျသိမွငျတောျမူသညျ။
၂၈။ မွတျစှာဘုရားသခငျ၏ ဘုရားသခငျနှငျ့ဆိုငျသောအလိုတောျသညျ အသငျ်ခြေ ဖွဈတောျမူသညျ။
၂၉။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ မိမိကိုယျကို လိုအပျမှုအပေါျ နှဈသကျတောျမူသျောလညျး တဖကျတှငျမူ လှတျလပျမှုအပွညျ့ဖွငျ့၊ ဘုရားထကျပိုသောအရာမြား၏ ဖနျဆငျး ခွငျးကိုလညျး နှဈသကျတောျမူသညျ့အပွငျ အလိုရှိတောျမူသညျ။
၃၀။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ တနျခိုးတောျ ဖွဈတောျမူ၏။
၃၁။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ ကောငျးကငျရှိအရာမြားနှငျ့ကမျ်ဘာမွကွေီးတို့၏ အရှငျသခငျ ဖွဈတောျမူ၏။
၃၂။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ အကွှငျးမဲ့ တရားမြှတခွငျး ဖွဈတောျမူ၏။
၃၃။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ အကွှငျးမဲ့ သနားကွငျနာခွငျး ဖွဈတောျမူသညျ။
၃၄။ မွတျစှာဘုရားသခငျ၌ ခမညျးတောျ၊ သားတောျနှငျ့သနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတောျဟူ၍ ပုဂျ်ဂိုလျသုံးပါး ရှိတောျမူ၏။ ပုဂျ်ဂိုလျတဈ ပါးစီသညျ ဘုရားအဖွဈတောျတဈခုစီကို ပိုငျဆိုငျတောျမူ၏။
၃၅။ မွတျစှာဘုရားသခငျ၌အတှငျးကသြောဘုရားအဖွဈတောျ၏ဖွဈစဉျ နှဈခု ရှိတောျမူ၏။
၃၆။ မွငျ့မွတျတောျမူကွသော ပုဂျ်ဂိုလျမြားသညျ ဘုရားအဖွဈတောျ၏ ပငျကိုယျ၌ မဟုတျဘဲ အတှငျးကသြောဘုရား အဖွဈတောျ ဖွဈစဉျ၏ ပုဂျ်ဂိုလျမြား ဖွဈတောျမူကွသညျ။
၃၇။ ဒုတိယမွောကျသော ပုဂျ်ဂိုလျဘုရားသညျ ပထမသောပုဂျ်ဂိုလျဘုရားထံမှ မြိုးဆကျအလိုကျ ဖွဈပေါျလာတောျမူပွီး သူတို့နှဈပါး အကွား၌ သားနှငျ့အဖဟူ၍ ဆကျနှယျမှု ရှိတောျမူသညျ။
၃၈။ သနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတောျဘုရားသညျ ခမညျးတောျနှငျ့သားတောျထံတောျမှ တဈခုတညျးသော လုပျစဉျတှငျ တဈခုတညျးသော ဆကျနှယျခွငျးမှ ဖွဈတောျမူသညျ။
၃၉။ သနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတောျဘုရားသညျ မြိုးဆကျဖွဈပှားခွငျးမှ ဖွဈပေါျလာခွငျးမဟုတျဘဲ ခမညျးတောျနှငျ့သား တောျတို့မှ ထှကျပေါျလာခွငျး ဖွဈတောျမူသညျ။
၄၀။ မွတျစှာဘုရားသခငျအတှငျးရှိ ဆကျဆံမှုမြားသညျ ဘုရားဇာတိတောျနှငျ့အတူ တဈထပျတညျး ဖွဈတောျမူသညျ။
၄၁။ ပုဂျ်ဂိုလျသုံးပါးတို့သညျ တဈပါးတညျးထဲတှငျ ရှိတောျမူကွသညျ။
၄၂။ ဘုရားသခငျ၏ လုပျငနျးတောျမြားအားလုံးသညျ ပုဂျ်ဂိုလျသုံးပါးနှငျ့အတူတူပငျ ဖွဈတောျမူသညျ။
၄၃။ မွတျစှာဘုရားသခငျ၏အပွငျဖကျတှငျ တညျရှိသောအရာအားလုံးသညျ ဘုရားသခငျ၏ ဗလာနတိအဖွဈမှ ဖနျဆငျးခံထား သော အရာမြား ဖွဈကွသညျ။
၄၄။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ မိမိကောငျးမွတျတောျမူခွငျး၏ နှိုးဆောျပေးမှုကွောငျ့ ကမျ်ဘာကွီးကို ဖနျဆငျးတောျမူသညျ။
၄၅။ ဤကမျ်ဘာကွီးသညျ မွတျစှာဘုရားသခငျအား ဘုနျးဂုဏျတောျတိုးတကျစရေနျအတှကျ ဖနျဆငျးခွငျး ခံရသညျ။
၄၆။ ပုဂျ်ဂိုလျသုံးပါးတို့သညျ တဈခုတညျးသော ဖနျဆငျးခွငျး၏ဘုံနိယာမ ဖွဈတောျမူသညျ။
၄၇။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ ပွငျပတှနျးပို့မှုကငျးပွီး အတှငျးပိုငျးလိုအပျခကြျကွောငျ့ ဤကမျ်ဘာကွီးကို ဖနျဆငျးတောျမူသညျ။
၄၈။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ ကောငျးမှနျသောကမျ်ဘာကွီးကို ဖနျဆငျးတောျမူခဲ့သညျ။
၄၉။ ကမျ်ဘာကွီးသညျ အခြိနျမှီအစ ရှိခဲ့သညျ။
၅၀။ မွတျစှာဘုရားသခငျတဈပါးတညျးကသာ ကမျ်ဘာကွီးကို ဖနျဆငျးတောျမူခဲ့သညျ။
၅၁။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ တညျရှိခွငျးတရားထဲ၌ ဖနျဆငျးခံအားလုံးကို ထိနျးသိမျးထားတောျမူသညျ။
၅၂။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ အရှငျမွတျ၏ ကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျမှုအောကျတှငျ အရှငျမွတျဖနျဆငျးတောျမူခဲ့သောအရာအားလုံး တို့ကို ကာကှယျခွငျးနှငျ့လမျးညှှနျပွပေးတောျမူသညျ။
၅၃။ ပထမဆုံးသော ပုထုဇဉျလူသားကို မွတျစှာဘုရားသခငျက ဖနျဆငျးတောျမူသညျ။
၅၄။ ပုထုဇဉျလူသား၌ ဝတျ်တုပိုငျးဆိုငျရာခနျ်ဓာကိုယျနှငျ့ ဝိညာဉျရေးဆိုငျရာ စိတျဝိညာဉျနှဈခုတို့ကို ပိုငျဆိုငျတောျမူသညျ။
၅၅။ ဆငျခွငျတုံတရားရှိသော ဝိညာဉျသညျ လူ့ခနျ်ဓာကိုယျ၏ အရေးပါသောပုံစံတဈခု ဖွဈသညျ။
၅၆။ ပုထုဇဉျလူသားတဈဦးသညျ ဝိညာဉျကိုယျစီ ပိုငျဆိုငျထားကွသညျ။
၅၇။ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ သဘာထကျလှနျကဲသော ပနျးတိုငျကို အပျနှငျးပေးတောျမူခဲ့သညျ။
၅၈။ ကြှနျုပျတို့၏ ပထမဆုံးသောမိဘနှဈပါးတို့သညျ နတျဆိုးလကျအောကျသို့ မကရြောကျမှီတှငျမူ၊ ဖွူစငျခွငျးကြေးဇူးတောျကို ရရှိတောျမူခဲ့ကွသညျ။
၅၉။ ကြှနျုပျတို့၏ ပထမဆုံးသောမိဘနှဈပါးတို့သညျ ခနျ်ဓာကိုယျမပကြျစီးနိုငျသော ဆုကြေးဇူးတောျကို ပေးအပျခွငျး ခံခဲ့ကွရသညျ။
၆၀။ ပါရာဒီဇူးထဲတှငျ နခေဲ့ကွသော ကြှနျုပျတို့၏ ပထမဆုံးသောမိဘနှဈပါးတို့သညျ ဘုရားရှငျမွတျ၏ စမျးသပျခွငျးဆိုငျရာ ပညတျ တောျကို ခြိုးဖောကျခွငျးအားဖွငျ့ ကွီးလေးသော အပွဈကို ကြူးလှနျခဲ့ကွသညျ။
၆၁။ ကြှနျုပျတို့ကနဦးမိဘနှဈပါးတို့၏ အပွဈကွောငျ့ ဖွူစငျခွငျးကြေးဇူးတောျကို ဆုံးရှုံးခဲ့ကွရပွီး ဘုရားရှငျမွတျ၏ အမကြျနှငျ့ ဒေါသ မြားကို ဖိတျခေါျခဲ့သညျ။
၆၂။ ကြှနျုပျတို့၏ ပထမဆုံးသောမိဘနှဈပါးတို့သညျသခွေငျးတရား၏ တရားခံမြားနှငျ့ နတျဆိုး၏လှမျးမိုးမှုတို့၏ သားကောငျ ဖွဈခဲ့ကွရသညျ။
၆၃။ အာဒံ၏အပွဈသညျ အတုယူခွငျးကွောငျ့မဟုတျဘဲ မြိုးဆငျးသကျခွငျးဖွငျ့ သားစဉျမွေးဆကျအဖွဈသို့ ကူးပွောငျးစသေညျ။
၆၄။ အပွဈရငျးသညျ သဘာဝမြိုးဆကျခွငျးဖွငျ့ ကူးပွောငျးသှားသညျ။
၆၅။ အပွဈရငျးအခွအေနတှေငျ ပုထုဇဉျလူသားသညျ ဖွူစငျခွငျးကြေးဇူးတောျမှ ကငျးကှာနပွေီး လူသားအားလုံးထံသို့ အကြုံးဝငျ စသေညျ့အပွငျ ရိုးသားဖွောငျ့မတျခွငျး၏ သဘာဝကိုလှနျဆနျသော ဆုလကျဆောငျနှငျ့လညျး ကငျးကှာစသေညျ။
၆၆။ အပွဈရငျးအခွအေနေ၌ ယခုဘဝမှသဆေုံးကွသူမြား၏ဝိညာဉျမြားသညျ မွတျစှာဘုရားသခငျ၏ ပီတိသောပန သာဖွဈသော မြှောျလငျ့ခကြျမှ ထုတျပယျခံကွရသညျ။
၆၇။ ကမျ်ဘာဦးအစကပငျ၊ မွတျစှာဘုရားသခငျသညျ ဘာမှမရှိခွငျးမှ ဝိညာဉျခနျ်ဓာသာ ရှိကွသော သိကွားတမနျမြားကို ဖနျဆငျးတောျ မူသညျ။
၆၈။ ကောငျးကငျသိကွားတမနျမြား၏ သဘာဝကား ဝိညာဉျ ဖွဈသညျ။
၆၉။ ကောငျးမွတျတောျမူသော သိကွားတမနျမြား၏ ဒုတိယတာဝနျသညျကား လူသားမြားကို ကာကှယျစောငျ့ရှောကျရနျနှငျ့ လူသားတို့၏ကယျတငျခွငျးကို ဂရုစိုကျပေးရနျ ဖွဈတောျမူသညျ။
၇၀။ နတျဆိုးသညျ အာဒံ၏အပွဈကွောငျ့ လူသားမြားအပေါျ အတိုငျးအတာတဈခုအထိ လှမျးမိုးခှငျ့ကို ပိုငျဆိုငျထားသညျ။
၇၁။ ယဇေူးခရဈတောျဘုရားသညျ စဈမှနျသောဘုရား၊ ဘုရားရှငျမွတျ၏စဈမှနျသောသားတောျ ဖွဈတောျမူသညျ။
၇၂။ ယဇေူးခရဈတောျဘုရားသညျ အပေါျယံဖွဈသော ခနျ်ဓာကိုယျမဟုတျဘဲ၊ စဈမှနျသောခနျ်ဓာကိုယျကို ပိုငျဆိုငျတောျမူသညျ။
ဃ့မငအြ ေြကြာနိေမနေူ ဘသိပယ ညသအ ညေ စစေမနေညအ ဘသိပ.
၇၃။ ယဇေူးခရဈတောျဘုရားသညျ ခနျ်ဓာကိုယျသာမက ဆငျခွငျတုံတရားရှိသော ဝိညာဉျကို သိမျးပိုကျတောျမူသညျ။
၇၄။ ယဇေူးခရဈတောျဘုရားသညျ အာဒံ၏သမီးတောျဖွဈတောျမူသော ကညာစငျမာရီယားမှ ဖှားမွငျတောျမူသညျ။
၇၅။ ဘုရားအဖွဈတောျနှငျ့လူ့အဖွဈတောျနှဈပါးတို့သညျ ယဇေူးခရဈတောျ၌ ပုဂျ်ဂိုလျသုံးပါးတို့ ပေါငျးစညျးတောျမူပွီး ပုဂ်ဂိုလျတဈပါး ၌ ၎င်းငျးအဖွဈတောျနှဈပါးတို့သညျ ပေါငျးစပျထားတောျမူသညျ။
၇၆။ ခရဈတောျယဇေူး၏လူ့အဖွဈယူခွငျးသညျ တဈခုတညျး၊ တဈပါးတညျး ဖွဈတောျမူသညျ။ ခရဈတောျအရှငျမွတျသညျ တခြိနျ တညျး၌ ဘုရားသခငျနှငျ့လူ ဖွဈတောျမူသညျ။
၇၇။ မွတျစှာဘုရားသခငျနှငျ့နှုတျကပတျတောျတို့သညျ အတှငျး၊ ခနျ်ဓာကိုယျနှငျ့အရာဝတုပိုငျးဆိုငျရာ ပွနျလညျ ပေါငျးစညျးခွငျးတို့ကို အသှေးအသားဖွငျ့ ဆကျစပျတောျမူသညျ။
၇၈။ ယဇေူးခရဈတောျဘုရား၏ သနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတောျနှငျ့ ရှေ့ဦးဖခငျကွီးမြားထဲတှငျ အခိုငျအမာပွောဆိုထားသော လူသား နှငျ့ဘုရားဆိုငျရာ လုပျဆောငျခကြျမြားသညျ ပုဂျ်ဂိုလျနှဈဦးအကွား၊ လူသားနှငျ့ခရဈတောျ၊ ဘုရားသခငျနှငျ့နှုတျကပတျတောျ၊ တှငျ ခှဲခွားမညျမဟုတျဘဲ လူ့အဖွဈကို ယူတောျမူသော နှုတျကပတျတောျဖွဈတောျမူသော ခရဈတောျတဈပါးတညျးနှငျ့သာ သကျဆိုငျတောျမူသညျ။ ၎င်းငျးသညျ ခနျ်ဓာကိုယျတှငျ နာကွငျမှုကို ခံယူပွီး လကျဝါးကားတိုငျတငျခံရခွငျး၊ အသခေံတောျမူခွငျးနှငျ့ ရှငျပွနျထမွောကျတောျမူသော မွတျစှာဘုရားသခငျ၏နှုတျကပတျတောျ ဖွဈတောျမူသညျ။
၇၉။ သနျ့ရှငျးသောကညာစငျသညျ မွတျစှာဘုရားသခငျ၏နှုတျကပတျတောျကို ကိုယျဝနျလှယျပွီး လူ့အဖွဈကို ယူတောျမူသော အခြိနျမှစပွီး ဘုရားသခငျ၏မိခငျ ဖွဈတောျမူသညျ။
၈၀။ ပုဂျ်ဂိုလျသုံးပါးတို့၏ တဈလုံးတဈဝတညျးဖွဈခွငျးထဲတှငျ ယဇေူးခရဈတောျဘုရား၏ ဘုရားအဖွဈနှငျ့လူ့အဖွဈနှဈပါးတို့သညျ တခွားပုဂျ်ဂိုလျတို့နှငျ့ မပွောငျးမလဲ၊ မရောမနှော၊ မထိမခိုကျဘဲ မူလအတိုငျး ရှိတောျမူသညျ။
၈၁။ ယဇေူးခရဈတောျဘုရားတှငျ ရှိတောျမူသော အဖွဈတောျနှဈပါးတို့သညျ တဈခုစီ၏ပငျကိုယျဆနနှငျ့ တဈခုစီ၏ ပငျကိုယျလုပျ ဆောငျခကြျတို့ကို ပိုငျဆိုငျထားတောျမူသညျ။
၈၂။ ယဇေူးခရဈတောျဘုရား၏ လူ့အဖွဈတောျနှငျ့ ခမညျးတောျဘုရားတို့၏ တဈလုံးတဝညျးဖွဈခွငျးသညျ သနတေညျသော အခြိနျမှ စတငျသညျ။
၈၃။ ပုဂျ်ဂိုလျသုံးပါးတို့၏ ပေါငျးစညျးခွငျးသညျ မညျသညျ့အခါမြှ ရပျဆိုငျးမညျမဟုတျ။
၈၄။ ပုဂျ်ဂိုလျသုံးပါးတို့၏ ပေါငျးစညျးခွငျးသညျ ၎င်းငျးပုဂျ်ဂိုလျသုံးပါးတို့၏ ဘုံလှုပျရှားခွငျးထဲတှငျ အကြိုးဖွဈထှနျးစသေညျ။
၈၅။ ဒုတိယမွောကျသော ပုဂျ်ဂိုလျဘုရားမွတျသညျသာ လူ့အဖွဈကို ယူတောျမူသညျ။
၈၆။ ယဇေူးခရဈတောျအရှငျမွတျသညျ ဘုရားအဖွဈသာမဟုတျ၊ လူ့အဖွဈဖွငျ့လညျး ဘုရားသခငျ၏သဘာ၀ သားတောျ ဖွဈတောျမူသညျ။
၈၇။ ဘုရားနှငျ့လူ့အဖွဈနှဈခုတို့ကို ပိုငျဆိုငျတောျမူသော ယဇေူးခရဈတောျဘုရားကို မွတျစှာဘုရားသခငျတဈပါးတညျးသာ ထိုကျတနျတောျမူသော တဈခုတညျးသော ကိုးကှယျယုံကွညျမှုမြိုးဖွငျ့ ရိုသခွေငျးကို ပွုကွရမညျ။
၈၈။ ယဇေူးခရဈတောျ၏ ဘုရားနှငျ့လူ့အငျ်ဂါရပျမြားနှငျ့လုပျဆောငျခကြျမြားကို တဈခုတညျးသောလူ့အဖွဈယူတောျ မူသော နှုတျက ပတျတောျအဖွဈသာ ရညျညှနျးတောျမူခွငျးကို ရရှိရမညျ။
၈၉။ ယဇေူးခရဈတောျသညျ အပွဈရငျးနှငျ့ လူတဈဦးစီ၏အပွဈမြားမှ လုံးဝကငျးစငျတောျမူသညျ။
၉၀။ ယဇေူးခရဈတောျ၏လူ့ဇာတိသညျ အာရုံခံနိုငျစှမျးနှငျ့ဒုကျ်ခခံနိုငျစှမျး ရှိတောျမူသညျ။
၉၁။ မွတျစှာဘုရားသခငျ၏သားတောျသညျ ပုထုဇဉျလူသားမြားကို ကယျတငျရနျအလို့ဌါ၊ လူ့အဖွဈကို ယူတောျမူသညျ။
၉၂။ အပွဈထဲသို့ကရြောကျသှားသော ပုထုဇဉျလူသားသညျ မိမိကိုယျကို ကယျတငျနိုငျခွငျး မရှိပေ။
၉၃။ ဘုရားနှငျ့လူသားဖွဈတောျမူသော ယဇေူးခရဈတောျသညျ ရဟနျးခြုပျ ဖွဈတောျမူသညျ။
၉၄။ ယဇေူးခရဈတောျဘုရားသညျ လကျဝါးကားတိုငျပေါျတှငျ စဈမှနျပွီး ကောငျးမှနျသော ပူဇောျခွငျးမြိုးဖွငျ့ မိမိကိုယျကို ပူဇောျ ဆကျသတောျမူခဲ့သညျ။
၉၅။ ခရဈတောျယဇေူးသညျ လကျဝါးကားတိုငျတောျတှငျ မိမိ၏ဆကျကပျပူဇောျခွငျးဖွငျ့ ကြှနျုပျတို့အား အပွဈနှံထဲမှ ပွနျလညျ ကယျနှုတျတောျမူပွီး ဘုရားသခငျနှငျ့ မိမိတို့အား ပွနျလညျကွအေေးသငျ့မွတျစတေောျမူခဲ့သညျ။
၉၆။ ယဇေူးခရဈတောျသညျ ကွိုတငျစီစဉျထားသော သခွေငျးမြိုးဖွငျ့ အသခေံတောျမူသညျ မဟုတျ။
၉၇။ ယဇေူးခရဈတောျ၏ လူသားမြားအတှကျ ပေးဆပျအသခေံခွငျးသညျ သဈ်စာဖောကျသော သိကွားတမနျမြားထံသို့ အကြိုးသကျ ရောကျခွငျး မရှိပေ။
၉၈။ ယဇေူးခရဈတောျဘုရားသညျ မိမိ၏ဒုကျ်ခခံခွငျးနှငျ့သခွေငျးတို့အားဖွငျ့ ဘုရားသခငျထံတောျမှ ဆုခပြေးခွငျးကို လကျခံရရှိ တောျမူသညျ။
၉၉။ ယဇေူးခရဈတောျဘုရားသညျ အသခေံတောျမူပွီးနောကျ၊ အရှငျမွတျ၏ဝိညာဉျတောျသညျ အရှငျမွတျ၏ခနျ်ဓာတောျနှငျ့ သီးခွား ခှဲထားခွငျးကို ခံရတောျမူပွီး ဒုစရိုကျလောကထဲသို့ ဆငျးသကျတောျမူသညျ။
၁၀၀။ ယဇေူးခရဈတောျသညျ အသခေံတောျမူပွီးနောကျ သုံးရကျမွောကျသောနေ့တှငျ သခွေငျးမှ ဘုနျးတနျခိုးကွီးစှာဖွငျ့ ရှငျပွနျ ထမွောကျတောျမူခဲ့သညျ။
၁၀၁။ ယဇေူးခရဈတောျဘုရားသညျ ကောငျးကငျဘုံသို့ ခနျ်ဓာနှငျ့ဝိညာဉျတို့နှဈပါးဖွငျ့ တကျကွှတောျမူပွီး ခမညျးတောျဘုရား၏ လငျ်ကြာတောျဘကျတှငျ ထိုငျနတေောျမူသညျ။
၁၀၂။ မယျတောျမာရီယားသညျ ဘုရားသခငျ၏ မိခငျ ဖွဈတောျမူသညျ။
၁၀၃။ မယျတောျမာရီယားသညျ အပွဈရငျး အစှနျးမထငျဘဲ သနျေ်ဓတညျခွငျးကို ခံရတောျမူသညျ။ ဂြိုးဇကျကုနျဇမှုနျး
(ကနြျရှိသော အခကြျမြားကို ဆကျလကျတငျဆကျပေးပါမညျ။)
Previous: ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးရေးကို ခွဲခြားသူသည် နိုင်ငံ့ရန်သူ ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန် ကာဒီနယ် ချားလ်စ်ဘို မိန့်ကြား
Next: Burma’s Cardinal Charles Maung Bo addressedaroom packed full of Parliamentarians and activists in the Houses of Parliament in UK